समाचार - चिनियाँ नयाँ वर्ष छुट्टी र स्क्रीन संरक्षक अर्डर व्यवस्था
चिनियाँ नयाँ वर्ष समय आउँदैछ, जसलाई वसन्त महोत्सव पनि भनिन्छ। यो सात दिनको छुट्टीको साथ चीनमा भव्य समारोह हो। सबैभन्दा रंगीन वार्षिक घटनाको रूपमा, परम्परागत चिनियाँ नयाँ वर्ष दुई हप्तासम्म रहन्छ, र चरमोत्कर्ष आइकनको रातो लालटिन, चर्को आतिशबाजी, पारिवारिक भोज र परेडको साथ चिनियाँ नयाँ वर्षको पूर्वतर्फ आउँछ।
२०२० मा कायर १ 19 को प्रकोपको साथ यसले व्यक्तिको जीवन र कामलाई परिवर्तन गरिरहेको छ। चिनियाँ सरकारको प्रभावकारी रोकथाम र नियन्त्रणको साथ, जनताको जीवन सामान्य स्थितिमा फर्किएको छ। तर मौसम चिसो हुने बित्तिकै, संक्रमण दर बढ्छ। सरकारले मानिसहरूलाई उनीहरूको कार्यस्थलहरूमा वसन्त महोत्सव खर्च गर्न र ठूलो संख्यामा जनताको बहावलाई रोक्न उद्यमहरूको गलत खुल्ने समयको व्यवस्था गर्न मानिसहरूलाई आग्रह गर्दछ।
वसन्त महोत्सव यात्रा भीड सुरु भएपछि, यातायात अपरेटरहरूले COVID-१ cases मुद्दाको पुनरुत्थान रोक्न र यात्रुहरूलाई उत्तम सेवा प्रदान गर्न उपायहरू कडा गरेका छन्।
अधिकांश कर्मचारीहरू अन्य प्रान्तका हुन्, त्यसैले उनीहरू परिवार संघको लागि गृहनगर फर्कने योजना गरिरहेका छन्। त्यसैले व्यवस्थापन सुरु गर्न सल्लाह दिएको छCNY को छुट्टी जनवरी th० देखि फेब्रुअरी १th सम्म. स्क्रीन प्रोटेक्टरहरूको सबै उत्पादन लाइन फेब्रु 3rd लाई बन्द हुनेछ।
१. जनवरी १ before भन्दा अघि हस्ताक्षर गरिएका आदेशहरू छुट्टी भन्दा अघि पठाइनेछ
२. जनवरी १ signed पछि हस्ताक्षर गरिएको अर्डरहरू मार्च भन्दा अघि छुट्टी पछि उत्पादन गर्ने व्यवस्था हुनेछ।
र हाम्रा ग्राहकहरूले अझै पनि हाम्रो मार्केटिंग व्यक्तिहरू र बिक्रीसँग सम्बन्धित कार्यहरू समाप्त गर्न र स्क्रिन संरक्षकहरूको लागि नयाँ खरीदको योजना सुरू गर्न संवाद गर्न सक्षम छन्। र छुट्टी पछि उत्पादन को काम पनि व्यवस्थित गरिएको छ।
कृपया हाम्रो पार्टनर र ग्राहकहरूको लागि नयाँ वर्षको लागि हाम्रो ईमानदार इच्छाहरू स्वीकार गर्नुहोस्।
नयाँ वर्षले तपाईलाई र तपाइँ सबैलाई माया गर्ने धेरै राम्रा चीजहरू र समृद्ध आशिष्‌हरू ल्याउन सक्दछ, आशा छ तपाइँसँग सब भन्दा खुसी र समृद्ध नयाँ वर्ष छ।
पोष्ट समय: जनवरी 30०-२०१२